PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-04 - NANKA AMA- ADLISA KWEZOBUHLE
NANKA AMA- ADLISA KWEZOBUHLE
Ilanga langeSonto - 2018-03-04 - Izindaba -
IZITAYELA zobuhle zishintsha ngaso sonke isikhathi. Muva nje abantu asebenedumela uma kuza kwezobuhle kuba ama- blogger,
ngoba afaka ama- video
ezinkundleni zokuxhumana nokwenza kube lula ukuxhumana nabantu abafana nami nawe.
Yingakho inkampani yezobucwebe yakwanwj ikhethe ukuba isebenzisane nabo kwazise balandelwa yizinkumbi zabantu. Lokhu kufakazelwa wukuqokwa kwentokazi engumphaquli ethekwini, udiva Cadach, ozobe efundisa abantu izindlela ezifanele zokuziphaqula kuwona lo mbukiso WENWJ.
Ngabantu abafana nodiva abazobe becobelela abantu ngamatrends angenisile kwezobuhle emcimbini obizwa ngenwj Beauty Experience oqale ngoLwesihlanu.
Uyasmin Kathoria, oyi-creative Director kwanwj, ucobelelane NELANGA Langesonto
ngezitayela kwezobuhle ezizobe zihamba phambili kulo nyaka.
UBUHLE BENDALO Ukuziphaqula ngokwedlulele yinto esibe yingxenye yezobuhle isikhathi eside. Muva nje isitayela esingenisile ngesokuthanda ubuhle bemvelo, ugqamise bona ngokusebenzisa i- make up
ngendlela okuyiyona futhi ungayisebenzisi kakhulu.
Ngaphambi kokusebenzisa i- make-up, kubalulekile ukuqala ngokunakekela isikhumba, uqinisekise ukuthi sinempilo futhi usebenzisa imikhiqizo efanele isikhumba sakho. I- trend
engenisile nonyaka yi- natural look okwazi ukuyithola ngokusebenzisa i- primer ne- highlighter
Ngonyaka owedlule u-alicia Keys, ongumculi, ube sematheni ngokuba athi uyehlukana nemake up neningi labesifazane lamlandela ngoba selikhathele wukusebenzisa iziphaqulo.
Kakubona bonke abesifazane abakwazi ukuba bakhululeke ngesikhumba sabo semvelo, yingakho kulula ukusebenzisa lokhu esikubalule ngenhla.
Muva nje uma unakisisa kosaziwayo, isitayela esingenisile ngese- monotone eyeshadow, lapho othola ukuthi kusetshenziswa umbala othile ngaphezu kweso nangaphakathi kwalo. Umbala o- ultraviolet ungenisile. Imibala ethi kayisondele ku- purple kumele ube nayo kwi- colour palette yakho, kanjalo no- green, u- blue no- pink kube ngethe ukuzotha kancane.
Nemibala ethanda ukucwebezela nayo ingenisile njengo- rose gold, u- gold ne- glitter kufakwe kancane ukuveza ubuhle bamehlo.
Izinkophe eziyihaba ezibuye zibizwe ngama- spider lashes, zingenisile kwabesifazane. Zikwenza ubukeke njengonodoli, ngaphezu kwalokho zenza namehlo agqame. Ukuze zikwazi ukuba zibukeke kahle, kudingeka usebenzise i- make-up encane ( minimal make up). Ne- pixie haircut okuyizinwele ezimfushane.
Sesadlula isikhathi sokungazinaki kwabesilisa, lapho owawuthola khona ukuthi owesilisa ozithandayo uzobizwa ngamagama angemahle ngoba ezithanda.
Muva nje isikhumba esinempilo sesihamba phambili kwabesilisa njengoba nemikhiqizo yokusinakekela eqondene nabo yanda.
Intshebe enakwayo idla lubi ikakhulukazi njengoba nemikhizo yakhona seyiminingi. Singabala kusuka kokusamafutha, i- balm, ama- shampoo nezinsipho zakhona. Kanjalo nezitayela ezahlukene nama- cut ahlukana ngobude nezitayela.